अध्याय १०६ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरा वचनहरू नजान्‍नेहरू, मेरो सामान्य मानवतालाई नचिन्‍नेहरू र मेरो ईश्‍वरत्वको अवज्ञा गर्नेहरू ध्वस्त भएर शून्यतामा पुग्‍नेछन्। यसबाट कसैलाई पनि छूट छैन र सबै जना यस पक्षको उचित मापदण्डमा पुग्‍नुपर्छ किनकि यो मेरो प्रशासनिक आदेश हो र यो अभ्यास गर्नुपर्ने सबैभन्दा गम्भीर कुरा हो। मेरा वचन नजान्‍नेहरू तिनै हुन् जसले मैले स्पष्टसँग सूचित गरेका कुराहरूलाई सुनेर पनि तिनको बारेमा ज्ञान हुँदैन; अर्को शब्दमा, ती मानिसहरूले आत्मिक कुराहरू बुझ्दैनन् (मैले आत्मिक कुराहरूसँग मेल खाने मानव पक्षहरूको सृष्टि नगरेको हुनाले, म तिनीहरूबाट धेरै माग गर्दिनँ; तिनीहरूले केवल मेरा वचनहरू सुनेको र व्यवहारमा लागू गरेको म चाहन्छु)। तिनीहरू मेरा घरका मानिसहरू होइनन्, न त तिनीहरू म जस्ता नै हुन्; तिनीहरू शैतानका देशका हुन्। यसैले म आत्मिक कुराहरू नबुझ्‍ने यी मानिसहरूमध्ये एक जना पनि चाहँदिनँ। पहिले मैले अति हद गरेको छु भनेर तिमीहरूले सोच्यौ, तर अब तिमीहरूले बुझ्‍नुपर्छ। जनावरहरूले कसरी परमेश्‍वरसँग कुराकानी गर्न सक्छन् र? के त्यो हास्यास्पद हुँदैन र? मेरो सामान्य मानवता नजान्‍ने मानिसहरू तिनै हुन् जसले मेरो मानवतामा मैले गर्ने काम नाप्‍नलाई आफ्नै धारणाहरूको प्रयोग गर्छन्। समर्पित हुनुको साटो तिनीहरू आफ्ना देहका आँखाले मेरो आलोचना गर्छन्। सायद मैले बोलेका वचनहरू व्यर्थ भएका छन्? मैले भनेको छु कि मेरो सामान्य मानवता मेरो, पूर्ण परमेश्‍वर स्वयम्‌को, अपरिहार्य भाग हो, अनि यही सही तरिकाले मेरो सामान्य मानवता र पूर्ण ईश्‍वरत्व एक-अर्कासँगै मिलेर काम गर्छन्: जब मैले मेरो सामान्य मानवताद्वारा गरेका कुराहरू मानव धारणाहरूसँग मेल खाँदैनन्, मेरो अवज्ञा गर्नेहरू र मसँग नमिल्‍नेहरू प्रकट गरिन्छन्। त्यसपछि, मेरो पूर्ण ईश्‍वरत्व मानवताद्वारा बोल्छ अनि यसरी मैले केही मानिसहरूको सामना गरेको छु। यदि मैले गर्ने कुरा तैँले बुझ्दैनस् तथापि तँ समर्पित हुन्छस् भने, तँ यस्तो किसिमको व्यक्ति हो जसलाई म दोषी ठहर्दिनँ; म यस्ता मानिसहरूलाई मात्र अन्तर्दृष्टि दिन्छु। म यस्ता मानिसहरूलाई प्रेम गर्छु, र तेरो समर्पणको कारण म तँलाई अन्तर्दृष्टि दिन्छु। मेरो ईश्‍वरत्वको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिहरूमा मेरो वचन नजान्‍ने, मेरो सामान्य मानवतासँग मेल नखाने र मैले ईश्‍वरत्वमा गरेको कामलाई अस्वीकार गर्ने (उदाहरणको लागि, म रिसाउनु वा मैले मण्डली निर्माण गर्नु र अन्य यस्तै) व्यक्तिहरू पर्छन्। यी सबै मेरो ईश्‍वरत्वप्रतिको प्रतिरोधका अभिव्यक्तिहरू हुन्। यद्यपि, मैले जोड दिनुपर्ने एउटा कुरा छ, र तिमीहरू हरेकले ध्यान दिनुपर्छ: आज जुन व्यक्ति छु त्योसँग मेल नखानेहरूले मेरो ईश्‍वरत्वको प्रतिरोध गरिरहेका हुन्छन्। अहिले म जुन व्यक्ति छु त्यही नै पूर्ण परमेश्‍वर स्वयम्‌ हो भनेर किन म निरन्तर भनिरहेको छु? म जो हुँ त्यस व्यक्तिको स्वभावमा ईश्‍वरीय स्वभावको सम्पूर्णता समेटिएको छ; मेरो मापन गर्नको निम्ति मानवीय धारणाहरूको प्रयोग नगर। अहिले पनि मसँग सामान्य मानवता छ र मैले गरेका सबै कुराहरू सही नै हुनुपर्छ भन्‍ने छैन भनेर धेरै मानिसहरूले अझै भन्छन्। जब मानिसहरू यस्तो हुन्छन् के तैँले मर्नको निम्ति माग गरिरहेको हुँदैनस् र? तिनीहरू मैले बोलेको एउटा पनि शब्द जान्दैनन् र तिनीहरू पूर्ण रूपमा अन्धकारका सन्तानहरू र ठूलो रातो अजिङ्‍गरको अण्डा हुन्! म हरेकलाई फेरि एक पटक भन्छु (र पछि म यो फेरि भन्‍नेछैनँ, अनि फेरि यो अपराध गर्ने निश्‍चय नै श्रापित हुनेछ): मेरा वचनहरू, मेरो हाँसो, मेरो खानपान, मेरो रहनसहन, मेरो वाणी र मेरो व्यवहार मद्वारा गरिन्छ—परमेश्‍वर स्वयम्‌—अनि त्यहाँ मानवताको अलिकति पनि निशान छैन। कुनै पनि छैन! पटक्कै छैन! सबै मानिसहरूले दिमागी खेलहरू खेल्न छोड्नुपर्छ, र आफ्ना क्षुद्र हिसाबकिताब गर्न छोड्नुपर्छ। मानिसहरूले जति यसलाई निरन्तरता दिन्छन्, तिनीहरू त्यति नै बरबाद हुनेछन्। मेरो सल्लाहमा ध्यान दे!
म सधैँ हरेकको भित्री हृदयको खोजी गरिरहेको छु, हरेक व्यक्तिको प्रत्येक शब्द र कामको खोजी गरिरहेको छु। म मैले मन पराउने र मैले मन नपराउनेलाई एक-एक गरेर स्पष्ट देख्छु। यो मानिसहरूले कल्पना गर्न नसक्‍ने कुरा हो र यसबाहेक, यो तिनीहरूले पुरा गर्न नसक्‍ने कुरा हो। मैले यति धेरै कुरा भनेको छु र मैले यति धेरै काम-कुरा गरेको छु; मेरा वचनहरूको उद्देश्य के हो र म के गर्छु भनेर के कसैले छुट्याउन सक्छ? कसैले पनि सक्दैन। अबदेखि, म अझ धेरै वचनहरू बोल्‍नेछु; एकातिर यसले मैले मन नपराउने मानिसहरूलाई हटाउनेछ भने अर्कोतिर, यसले तिमीहरूलाई यस सम्बन्धमा अलिकति धेरै कष्ट दिन्छ, ताकि तिमीहरूले थप गम्भीरताको साथमा मात्र फेरि एक पटक पुनरुत्थान चाख्‍नेछौ। यसलाई मानिसहरूले निर्धारण गर्न सक्दैनन् न त कसैले यसलाई हुनबाट रोक्‍न नै सक्छ। तिमीहरूले यसको बारेमा अहिले थाहा पाए पनि, जब समय आउँछ तिमीहरू यस्तो किसिमको कष्टबाट बच्‍न सक्‍नेछैनौ किनकि यो मेरो कामको विधि हो। मैले मेरा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि यसरी काम गर्नुपर्छ, ताकि मेरो इच्छा तिमीहरूमा पूरा होस्। यसैले यसलाई “तिमीहरूले सहनुपर्ने अन्तिम कष्ट” भनेर भनिन्छ। त्यसपछि, तिमीहरूको देह फेरि कष्टमा पर्नेछैन, किनकि ठूलो रातो अजिङ्गर मद्वारा पूर्ण रूपमा नष्ट पारिएको हुनेछ र त्यसले फेरि दङ्गा गर्ने साहस गर्नेछैन। यो देहमा प्रवेश गर्नुअघिको अन्तिम चरण हो; यो सङ्क्रमणकालीन चरण हो। तर नडराओ—म हरेक कठिनाइमा तिमीहरूलाई अगुवाइ गर्नेछु। विश्‍वास गर, म धर्मी परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुँ र मैले भनेका कुराहरू निश्‍चय नै हुन आउनेछन्। म भरोसायोग्य परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुँ। सबै देश, सबै भूमि र सबै सम्प्रदायहरू मकहाँ फर्कँदैछन् र मेरो सिंहासनतर्फ एकत्र हुँदैछन्। यो मेरो महान् शक्ति हो र म विद्रोहका हरेक सन्तानको न्याय गर्नेछु र कुनै अपवादविना तिनीहरूलाई आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्याँक्नेछु। सबै पछि हट्नुपर्नेछ। यो मेरो व्यवस्थापन योजनाको अन्तिम चरण हो, र यो समाप्त भएपछि म विश्राममा प्रवेश गर्नुपर्छ, किनकि हरेक कुरा गरिसकिएको हुनेछ र मेरो व्यवस्थापनको योजनाको अन्त्य भएको हुनेछ।
किनकि मेरो कामको गतिमा वृद्धि भएको हुनाले (यद्यपि म कति पनि चिन्तित महसुस गर्दिनँ), म प्रतिदिन मेरा वचनहरू तिमीहरू सामु प्रकट गर्छु र हरेक दिन मैले रोकेर राखेका रहस्यहरू उजागर गर्छु, ताकि तिमीहरूले मेरा पाइलाहरूलाई नजिकबाट पछ्याउन सक। (यो मेरो बुद्धि हो; मानिसहरूलाई सिद्ध तुल्याउन र मानिसहरूलाई प्रहार गर्नको निम्ति म मेरा वचनहरू प्रयोग गर्छु। सबैले मेरा वचनहरू पढ्छन् र मेरा वचनहरूमा भएको मेरो इच्छाअनुसार काम गर्न सक्छन्। नकारात्मक हुनेहरू नकारात्मक नै हुनेछन्, र प्रकट गरिनुपर्नेहरूले आफ्नो साँचो रङ देखाउनेछन्; अटेरीहरूले प्रतिरोध गर्नेछन् र मलाई वफादार भएर प्रेम गर्नेहरू अझ वफादार हुनेछन्। यसरी सबै जना मेरा पाइलाहरू पछ्याउन सक्षम हुनेछन्। मैले वर्णन गरेका यी सबै परिस्थितिहरू मैले काम गर्ने विधिहरू र मैले प्राप्त गर्न इच्छा गरेका लक्ष्यहरू हुन्।) विगतमा, मैले यस्ता किसिमका कुराहरू भनेको छु: मैले तिमीहरूलाई जसरी अगुवाइ गर्छु, तिमीहरूले पनि सोही तरिकाले खोजी गर्नुपर्छ; मैले जे बोल्छु त्यो तिमीहरूले सुन्‍नुपर्छ। यसको अर्थ के हो? के तिमीहरूलाई थाहा छ? मेरो वचनको उद्देश्य र महत्त्व के हो? के तिमीहरू बुझ्छौ? कति जना मानिसहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन्? जब म भन्छु, “मैले तिमीहरूलाई जसरी अगुवाइ गर्छु, तिमीहरूले पनि सोही,” मैले केवल म जुन व्यक्ति हुँ त्यसको रूपमा प्रदान गर्ने मार्गदर्शनलाई मात्र इङ्गित गरिरहेको छैन; यसबाहेक मैले आफूले बोल्‍ने वचनहरू र मैले लिने मार्गलाई इङ्गित गरिरहेको छु। आज, यी वचनहरू साँच्चै नै पूरा भएका छन्। मैले मेरा वचनहरू बोलिसक्‍ने बित्तिकै मेरो उपस्थितिको ज्योतिको अगाडि सबै किसिमका दुष्ट अनुहारहरू तिमीहरूले सबैलाई स्पष्टसँग देख्‍न सक्‍ने गरी उजागर हुनेछन्। यी मेरा वाणीहरू शैतानका निम्ति मेरा घोषणा मात्र होइनन् तर तिमीहरू सबैलाई सुम्पिएको कुरा पनि हो। तिमीहरूमध्ये धेरैले यी वचनहरूलाई तिमीहरूलाई सुम्पिएको कुरा हो भन्‍ने ठानेर तिनलाई बेवास्ता गर्छौ; ती न्यायका वचनहरू र अधिकार सहितका वचनहरू हुन् भन्‍ने तिमीहरूलाई लाग्दैन। मेरा वचनहरूको उद्देश्य भनेको मेरो उचित सेवा गर्न र ममा पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नको निम्ति शैतानलाई आज्ञा दिनु हो। मैले विगतमा प्रकट गरेका रहस्यहरूमध्ये अझ पनि तिमीहरूले बुझ्‍न नसक्‍ने धेरै कुरा छन्। तसर्थ, भविष्यमा म तिमीहरूलाई अझै धेरै कुरा प्रकट गर्नेछु, ताकि तिमीहरूले अझ स्पष्ट र विस्तृत बुझाइ प्राप्त गर्न सक।
जब प्रकोप आउँछ, प्रत्येक व्यक्ति डराउँछ। मानिसहरू सबै दुःखका साथ रुन्छन् र आफूले विगतमा गरेको दुष्ट कुराहरूप्रति घृणा महसुस गर्छन्, तर त्यति बेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ, किनकि यो क्रोधको युग हो। यो मानिसहरूलाई मुक्ति दिने र अनुग्रह प्रदान गर्ने समय होइन, तर सबै सेवाकर्तालाई हटाउने र मेरा छोराहरूलाई मेरो निम्ति शासन गर्न लगाउने समय हो। वास्तवमा यो विगतको समयभन्दा फरक छ; संसारको सृष्टिदेखि कहिले पनि यसो गरिएको छैन। मैले संसारलाई एक पटक सृष्टि गरेको हुनाले, म यसलाई एक पटक नष्ट गर्नेछु, र मैले अघिबाटै नियुक्त गरेको कुरालाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। “सामूहिक इसाई मानिसहरू” र “सामूहिक विश्‍वव्यापी नयाँ मानिसहरू” भन्‍ने वाक्यांशहरू पहिले धेरै पटक प्रयोग गरिन्थ्यो। तिनलाई कसरी व्याख्या गर्ने? के “सामूहिक इसाई मानिसहरू” ले ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई जनाउँछ? के “सामूहिक विश्‍वव्यापी नयाँ मानिसहरू” ले पनि ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई जनाउँछ? जनाउँदैन; मानिसहरूले यी वाक्यांशहरूलाई सही तरिकाले व्याख्या गरेका छैनन्। मानवीय धारणाहरूले तिनीहरूलाई यही हदसम्म मात्र बुझ्‍न मद्दत गर्ने हुनाले, म तिनलाई अहिले यहाँ नै तिमीहरूको निम्ति स्पष्ट पारिदिन्छु। सामूहिक इसाई मानिसहरू र सामूहिक विश्‍वव्यापी नयाँ मानिसहरू उस्तै होइनन्; तिनका अर्थ फरक छन्। यी दुबै वाक्यांशका शब्दहरू अत्यन्तै समान भए पनि, र ती उस्तै जस्ता देखिए पनि, साँचो परिस्थिति पूर्ण रूपमा विपरीत छ। “सामूहिक इसाई मानिसहरू” ले कसलाई जनाउँछ। वा यसले केलाई जनाउँछ। इसाई मानिसहरूको बारेमा कुरा गर्दा, हरेकले सर्वसम्मतिले मलाई सोच्छन्। तिनीहरू यसो गर्नु बिलकुलै गलत भने होइन। यसका अतिरिक्त, मानवीय धारणामा “मानिसहरू” शब्दले निश्‍चित रूपमा मानवलाई जनाउँछ; कुनै पनि व्यक्तिले यसलाई अर्को कुरासँग जोड्दैन। “सामूहिक” शब्दको बारेमा कुरा गर्दा, मानिसहरूले यसलाई एकै इकाई भएर भेला भएका धेरै मानिसहरूको रूपमा बुझ्छन्, यसैले “सामूहिक” भनिएको हो। यहाँ मानव मन अति धेरै सामान्य छ भन्‍ने जस्तो देखिन सक्छ; तिनीहरूले मेरो अर्थलाई बुझ्‍नै सक्दैनन्। अब, म औपचारिक रूपमा सामूहिक इसाई मानिसहरू के हो भन्‍ने बारेमा सङ्‍गति सुरु गर्नेछु (तर मानिसहरूले तिनीहरूका आफ्ना धारणाहरूलाई हटाउनुपर्छ; नत्रता तिनीहरूमध्ये कसैले पनि बुझ्‍न सक्‍नेछैनन् र यदि मैले उक्त शब्दको व्याख्या नै गरेँ भने पनि, तिनीहरूले न त विश्‍वास गर्नेछन् न त बुझ्‍न नै सक्नेछन्): मेरा वचनहरू बोलिने बित्तिकै, मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूले मेरा इच्छाअनुसार कार्य गर्न सक्‍नेछन् र मेरो इच्छा व्यक्त गर्नेछन्, यसैले तिनीहरू एकै हृदय र एकै मुखका हुन्। तिनीहरूले सारा जातीहरू र सारा मानिसहरूको न्याय गर्दैगर्दा, तिनीहरूले मेरो धार्मिकतालाई अघि बढाउनेछन् र मेरा प्रशासनिक आदेशहरूलाई लागू गर्नेछन्; तिनीहरू मेरा अभिव्यक्ति हुन्, र तिनीहरू मेरा प्रकटीकरण हुन्। यसैले यसो भन्‍न सकिन्छ कि सामूहिक इसाई मानिसहरू मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूले मेरा प्रशासनिक आदेशहरू लागू गरेको तथ्य हो; ती ज्येष्ठ पुत्रहरूका हातमा भएका अधिकार हुन्। यो सबै ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छ—यसैले “इसाई मानिसहरू” भन्‍ने शब्दहरू प्रयोग गरिएको हो। यसका अतिरिक्त, सबै ज्येष्ठ पुत्रहरूले मेरो इच्छाअनुसार काम गर्न सक्छन् अनि यही कारणले गर्दा, म “सामूहिक” शब्द प्रयोग गर्छु। “सामूहिक विश्‍वव्यापी नयाँ मानिसहरू” को अर्थ मेरा नामका सबै मानिसहरू हो; अर्को शब्दमा, मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू, मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरू। “नयाँ” शब्दले मेरो नामलाई जनाउँछ। तिनीहरू मेरा नाममा भएको कारण (मेरो नामले सबै कुरा बहन गर्छ, र यो अनन्तसम्म नयाँ छ र कहिले पनि पुरानो हुँदैन; यसलाई मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन), अनि तिनीहरू भविष्यमा सदाको लागि जीवित रहने भएको कारण, तिनीहरू विश्‍वव्यापी नयाँ मानिसहरू हुन्। यहाँ “सामूहिक” शब्द मानिसहरूको सङ्ख्या जनाउनको निम्ति हो, र यो पहिलेको कुरा जस्तो होइन। जब मेरो वचन बोलिन्छ, सबैले यसमा विश्‍वास गर्नुपर्छ। शङ्का नगर। आफ्ना मानवीय धारणा र मानवीय विचारहरूबाट आफूलाई मुक्त गर। रहस्यहरू प्रकट गर्ने मेरो वर्तमान प्रक्रिया ठ्याक्कै मानवीय धारणा र विचारहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नै हो (मानिसहरूले मलाई र मैले भनेको कुराको मापन गर्नको निम्ति आफ्नै धारणाहरूको प्रयोग गर्ने भएको कारण, मानवीय धारणा र विचारहरू हटाउनको निम्ति म मेरा आफ्नै प्रकट भइसकेका रहस्यहरूको प्रयोग गर्छु)। यो काम चाँडै नै पूरा हुनेछ। जब मेरा रहस्यहरू निश्‍चित हदसम्म प्रकट गरिन्छन्, मानिसहरूमा मेरा वचनहरूको बारेमा लगभग कुनै पनि विचार प्रक्रिया हुनेछैन, र तिनीहरूले मलाई आफ्ना मानवीय धारणाद्वारा मापन गर्न छोड्नेछन्। तिनीहरूले हरेक दिन जे सोच्छन्, म प्रकट गर्नेछु र म प्रतिकार गर्नेछु। कुनै निश्‍चित बिन्दुमा, मानिसहरूले सोच्न छोड्नेछैनन्; तिनीहरूका मस्तिष्क सोचविनाका खोक्रा हुनेछन्, र तिनीहरू मेरा वचनहरूमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुनेछन्। त्यो तिमीहरू आत्मिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समय पनि हुनेछ। यो मेरो कामको यो चरण हो जुन मैले तिमीहरूलाई आत्मिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिनुभन्दा अगाडि आउँछ। तिमीहरू पवित्र, निष्खोट भएर आत्मिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु अगाडि आफ्ना सबै मानवीय धारणाहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ। “म पवित्र आत्मिक देह हुँ” भन्‍नुको अर्थ यही हो। तैपनि, तिमीहरूले मेरा चरणहरूबमोजिम काम गर्नुपर्छ र तिमीहरूलाई थाहा हुनुभन्दा अगाडि नै मेरो समय आउनेछ।
अघिल्लो: अध्याय १०५
अर्को: अध्याय १०७